Probiotics က ကောငျးလား၊ မကောငျးဘူးလား ???? | OnDoctor
Probiotics က ကောငျးလား၊ မကောငျးဘူးလား ????
😷 12,425 Total Cases
😥 284 Deaths
😇 3,391 Recovered
By OnDoctor Editor	 On May 23, 2018 Last updated Nov 9, 2019
Probiotics က ကောင်းလား၊ မကောင်းဘူးလား ????
အခုရက်ပိုင်း ကြေညာတွေ မှာ probiotics အကြောင်းတွေ ပြောပြီးကြေညာလာကြတော့ လူတော်တော်များများ ကတော့ probiotics ကောင်းမှန်းတော့ သတိထားလာမိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လို ဘယ်ပုံ ကျန်းမာရေး အတွက် အကျိုးရှိနိုင်သလဲ ဆိုတာကို အသေးစိတ် ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။
တကယ်တော့ probiotics ဆိုတာ အသက်ရှိသေးတဲ့ ဘတ်တီးရီယား တွေပါပဲ။ ဘတ်တီးရီးယားလို့ပြောတော့ ကျွန်တော်တို့ စိတ်ထဲ ဝင်လာတာ ကတော့ လူကို ဒုက္ခပေးစေတတ်တယ် ဆိုတာပါပဲ။ တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ ခန္ဓာကိုယ် မှာ မမြင်ရတဲ့ ပိုးမွှား သန်းပေါင်း များစွာရှိနေပါတယ်။ အကုန်လုံးက ဒုက္ခမဖြစ်စေပါဘူး။ တချို့ က ဒုက္ခပေးတာ ရှိသလို၊ တချို့ကြပြန်တော့လည်း လူ့ ခန္ဓာကိုယ် ကို ကောင်းကျိုးပေးနိုင်ပါတယ်။ probiotics ဆိုတာ ကောင်းကျိုးပေးတဲ့ bacteria နှင့် yeast တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အထူး သဖြင့် ကျွန်တော် တို့ အူလမ်းကြောင်း တလျှောက်မှာ ပိုးမွှားမျိုးစုံ က နေရာ အပြည့် ယူထားကြပါတယ်။ ကောင်းတဲ့ ဘတ်တီးရီးယားတွေ ပါသလို၊ မကောင်းတဲ့ လူကို ဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့ ပိုးမွားတွေ ကလည်း နေရာ ယူထားကြပါတယ်။
အလွယ်ပြောရရင် ကျွန်တော်တို့ ဝမ်းဗိုက် သက်တောင့် သက်သာ ဖြစ် စေဖို့ အတွက် က ကောင်းတဲ့ ဘတ်တီးရီးယား တွေ နေရာပို ယူထားပေးဖို့ လိုပါတယ်။
ဥပမာ – ကျွန်တော်တို့ နေထိုင်မကောင်း လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ချောင်းဆိုး လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပိုးသတ်ဆေး Antibiotics တွေ သောက်လိုက်တော့ မကောင်းတဲ့ ပိုးမွှားတွေ နှင့် အတူ probiotics တွေပါ ရောပြီး သေသွားတတ်ပါတယ်။ နောက်ဆက်တွဲ ဘာဖြစ်တတ်လဲ ဆိုတော့ တချို့သော ပိုးသတ်ဆေးတွေ သောက်ရင် ဝမ်းလျှောတတ်ပါတယ်။ ဝမ်းလျှောတတ်တယ် ဆိုပြီး ဒီပိုးသတ်ဆေးတွေ မသောက် လို့ကလည်း မဖြစ်၊ သောက်တော့ သောက်ရမှာပါပဲ၊ ဒါပေမယ့် ဘာလုပ်သင့်လဲ ဆိုတော့ ပိုးသတ်ဆေး သောက်နေတဲ့ ကာလ အတွင်းမှာ သန့်ရှင်းတဲ့ ဒိန်ချဉ်တခွက်လောက် ပြန်သောက် ပေးလိုက်တာ ပာာ ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ probiotics တွေ ကို ပြန်လည် ဖြည့်တင်းပေးပါတယ်။ တချို့ က လန့ကြပါတယ်။ ဝမ်းလျှောနေတာ ဒိန်ချဉ်ကျွေးရင် ပိုဝမ်းလျှော ကုန်မှာပေါ့ဆိုပြီး။ တကယ်တော့ သန့်ရှင်း လတ်ဆက်တဲ့ ဒိန်ချဉ် ကတော့ ဝမ်းလျှောတာ ကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လို ရောဂါ တွေ၊ ဘယ်လို အခြေအနေ တွေ မှာ probiotics ပါတဲ့ အစားအစာ တွေ ပိုစားသင့်သလဲ????
1. Irritable Bowel Syndrome (ခဏခဏ ဝမ်းသွားခြင်း)
2. Inflammatory Bowel Disease (အူလမ်းကြောင်း ယောင်ခြင်း)
3. ဘတ်တီးရီးယား၊ ဗိုင်းရပ်စ်၊ သံကောင်၊ တုတ်ကောင် ကြောင့် ဖြစ်တတ်တဲ့ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှော ရောဂါ
4. ပိုးသတ်ဆေး ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ဝမ်းလျှောခြင်း စတဲ့ အခြေ အနေမှာ probiotics ကြွယ်ဝဂတဲ့ အစားအစာ တွေ ပိုစားပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
အခုနောက်ပိုင်း လေ့လာချက် အချို့ မှာတော့ probiotics တွေ ပာာ
1. အရေပြားရောဂါ (Eczema)
2. မိန်းမကိုယ် နှင့် ဆီးလမ်းကြောင်း ကျန်းမာရေး
3. တချို့သော ဓါတ်မတည့်တာ၊ နှာစေးချောင်းဆို ဖြစ်တာ
4. ခံတွင်း ကျန်းမာရေး တွေ အတွက် လည်း ကောင်းမွန်တယ် လို့ ပြောလာကြပါတယ်။
Probiotics ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာ များ
2. အချဉ်ဖောက်ထားသော ဂေါ်ဖီထုပ်
3. မီဆို ပာင်းချို
5. Yeast bread
6. Probiotics ထပ်ထည့်ထားသော နို့
7. သန့်ရှင်းသော လက်လုပ်ချဉ် အချို့
8. ပျားရည် စတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျန်းမာရေး အတွက်ကောင်းတယ် ဆိုပြီး အများကြီး စားသင့်သလား????
အခု ကျွန်တော်ပြောထားတာ တွေ ကတော့ ကောင်းကျိုးတွေ ချည်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့် တချို့ တချို့သော သူတွေ မှာ ဆိုရင် probiotics နဲ့ မတည့်တာတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ ဥပမာ- ဗိုက်အောင့် ခြင်း၊ လေပွခြင်း စတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲ့လို ဖြစ်ရင်တော့ သက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန် နှင့် ပြပြီး ဘယ်လိုမျိုး စားသောက်ရမလဲ ကို အသေးစိတ် တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
အခုရကျပိုငျး ကွညောတှေ မှာ probiotics အကွောငျးတှေ ပွောပွီးကွညောလာကွတော့ လူတျောတျောမြားမြား ကတော့ probiotics ကောငျးမှနျးတော့ သတိထားလာမိကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဘယျလို ဘယျပုံ ကနျြးမာရေး အတှကျ အကြိုးရှိနိုငျသလဲ ဆိုတာကို အသေးစိတျ ဖျောပွပေးခငျြပါတယျ။
တကယျတော့ probiotics ဆိုတာ အသကျရှိသေးတဲ့ ဘတျတီးရီယား တှပေါပဲ။ ဘတျတီးရီးယားလို့ပွောတော့ ကြှနျတျောတို့ စိတျထဲ ဝငျလာတာ ကတော့ လူကို ဒုက်ခပေးစတေတျတယျ ဆိုတာပါပဲ။ တကယျတော့ ကြှနျတျောတို့ ခန်ဓာကိုယျ မှာ မမွငျရတဲ့ ပိုးမှား သနျးပေါငျး မြားစှာရှိနပေါတယျ။ အကုနျလုံးက ဒုက်ခမဖွဈစပေါဘူး။ တခြို့ က ဒုက်ခပေးတာ ရှိသလို၊ တခြို့ကွပွနျတော့လညျး လူ့ ခန်ဓာကိုယျ ကို ကောငျးကြိုးပေးနိုငျပါတယျ။ probiotics ဆိုတာ ကောငျးကြိုးပေးတဲ့ bacteria နှငျ့ yeast တို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။ အထူး သဖွငျ့ ကြှနျတျော တို့ အူလမျးကွောငျး တလြှောကျမှာ ပိုးမှားမြိုးစုံ က နရော အပွညျ့ ယူထားကွပါတယျ။ ကောငျးတဲ့ ဘတျတီးရီးယားတှေ ပါသလို၊ မကောငျးတဲ့ လူကို ဒုက်ခပေးနိုငျတဲ့ ပိုးမှားတှေ ကလညျး နရော ယူထားကွပါတယျ။
အလှယျပွောရရငျ ကြှနျတျောတို့ ဝမျးဗိုကျ သကျတောငျ့ သကျသာ ဖွဈ စဖေို့ အတှကျ က ကောငျးတဲ့ ဘတျတီးရီးယား တှေ နရောပို ယူထားပေးဖို့ လိုပါတယျ။
ဥပမာ – ကြှနျတျောတို့ နထေိုငျမကောငျး လို့ပဲ ဖွဈဖွဈ၊ ခြောငျးဆိုး လို့ပဲ ဖွဈဖွဈ ပိုးသတျဆေး Antibiotics တှေ သောကျလိုကျတော့ မကောငျးတဲ့ ပိုးမှားတှေ နှငျ့ အတူ probiotics တှပေါ ရောပွီး သသှေားတတျပါတယျ။ နောကျဆကျတှဲ ဘာဖွဈတတျလဲ ဆိုတော့ တခြို့သော ပိုးသတျဆေးတှေ သောကျရငျ ဝမျးလြှောတတျပါတယျ။ ဝမျးလြှောတတျတယျ ဆိုပွီး ဒီပိုးသတျဆေးတှေ မသောကျ လို့ကလညျး မဖွဈ၊ သောကျတော့ သောကျရမှာပါပဲ၊ ဒါပမေယျ့ ဘာလုပျသငျ့လဲ ဆိုတော့ ပိုးသတျဆေး သောကျနတေဲ့ ကာလ အတှငျးမှာ သနျ့ရှငျးတဲ့ ဒိနျခဉျြတခှကျလောကျ ပွနျသောကျ ပေးလိုကျတာ ပာာ ဆုံးရှုံးသှားတဲ့ probiotics တှေ ကို ပွနျလညျ ဖွညျ့တငျးပေးပါတယျ။ တခြို့ က လန့ကွပါတယျ။ ဝမျးလြှောနတော ဒိနျခဉျြကြှေးရငျ ပိုဝမျးလြှော ကုနျမှာပေါ့ဆိုပွီး။ တကယျတော့ သနျ့ရှငျး လတျဆကျတဲ့ ဒိနျခဉျြ ကတော့ ဝမျးလြှောတာ ကို သကျသာစနေိုငျပါတယျ။
ဘယျလို ရောဂါ တှေ၊ ဘယျလို အခွအေနေ တှေ မှာ probiotics ပါတဲ့ အစားအစာ တှေ ပိုစားသငျ့သလဲ????
1. Irritable Bowel Syndrome (ခဏခဏ ဝမျးသှားခွငျး)
2. Inflammatory Bowel Disease (အူလမျးကွောငျး ယောငျခွငျး)
3. ဘတျတီးရီးယား၊ ဗိုငျးရပျဈ၊ သံကောငျ၊ တုတျကောငျ ကွောငျ့ ဖွဈတတျတဲ့ ဝမျးပကျြဝမျးလြှော ရောဂါ
4. ပိုးသတျဆေး ကွောငျ့ ဖွဈတဲ့ ဝမျးလြှောခွငျး စတဲ့ အခွေ အနမှော probiotics ကွှယျဝဂတဲ့ အစားအစာ တှေ ပိုစားပေးဖို့ လိုအပျပါတယျ။
အခုနောကျပိုငျး လလေ့ာခကျြ အခြို့ မှာတော့ probiotics တှေ ပာာ
1. အရပွေားရောဂါ (Eczema)
2. မိနျးမကိုယျ နှငျ့ ဆီးလမျးကွောငျး ကနျြးမာရေး
3. တခြို့သော ဓါတျမတညျ့တာ၊ နှာစေးခြောငျးဆို ဖွဈတာ
4. ခံတှငျး ကနျြးမာရေး တှေ အတှကျ လညျး ကောငျးမှနျတယျ လို့ ပွောလာကွပါတယျ။
Probiotics ကွှယျဝတဲ့ အစားအစာ မြား
2. အခဉျြဖောကျထားသော ဂျေါဖီထုပျ
3. မီဆို ပာငျးခြို
6. Probiotics ထပျထညျ့ထားသော နို့
7. သနျ့ရှငျးသော လကျလုပျခဉျြ အခြို့
8. ပြားရညျ စတာတှေ ဖွဈပါတယျ။
ကနျြးမာရေး အတှကျကောငျးတယျ ဆိုပွီး အမြားကွီး စားသငျ့သလား????
အခု ကြှနျတျောပွောထားတာ တှေ ကတော့ ကောငျးကြိုးတှေ ခညျြးပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ တခြို့ တခြို့သော သူတှေ မှာ ဆိုရငျ probiotics နဲ့ မတညျ့တာတှေ ရှိတတျပါတယျ။ ဥပမာ- ဗိုကျအောငျ့ ခွငျး၊ လပှေခွငျး စတာတှေ ဖွဈတတျပါတယျ။ အဲ့လို ဖွဈရငျတော့ သကျဆိုငျရာ ဆရာဝနျ နှငျ့ ပွပွီး ဘယျလိုမြိုး စားသောကျရမလဲ ကို အသေးစိတျ တိုငျပငျသငျ့ပါတယျ။
ကလေးငယ်များတွင် ဖြစ်လေ့ရှိသော ဘယ်ရီဘယ်ရီရောဂါ
ခြောကလကျ စားခွငျးဖွငျ့ ရရှိနိုငျတဲ့ ကနျြးမာရေးအကြိုးကြေးဇူးမြား
Protein Supplement တှေ ကို ဘယျလောကျ အထိသောကျနကွေလဲ????
အုနျးရညျ မှာ ဘာတှေ ပါလဲ????
နှာခေါငျး အစာပိုကျ ထညျ့ထားသော လူနာမြား အတှကျ အာဟာရ
ခြောကလကျ စားခွငျးဖွငျ့ ရရှိနိုငျတဲ့…